We She Me: မိုးချိုသင်း ဟော်မုန်း
Anonymous - 2/27/09, 9:07 PM
I think I also have such kind of feeling, releasing hormones as you mentioned, like reflecting feeling of being inaparticular place. This is really interesting topic. Thanks for sharing.
Anonymous - 2/27/09, 10:31 PM
စလုံးရောက်ပြီး နောက်နေ့ တိုပါးရိုးဈေးတန်းထဲ ရောက်သွားတော့ မြေပြင်ပေါ်မှာ အီးယား အီးယား ယို ဆိုပြီး ဓာတ်ခဲအရုပ်တွေ ကနေတာကို ရပ်ကြည့်မိတာ နောက်ခါအဲဒီနား ရောက်တိုင်း ရောက်ခါစရက်က ခံစားချက်တွေ ပြန်ရတယ်။ (ယောင်တောင်တောင် ခံစားချက်တွေပါ။ )နိုင်ငံခြားရောက်စဆိုတော့ နားထဲစွဲမိစွဲရာ စွဲသွားတာနေမှာ။
Anonymous - 2/27/09, 10:54 PM
Btw, Your Blog & 99 Sanay blog also Have Uniqye Hormone for me...
Sincere feeling & Sharing to PPL...in Good way...!!
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် - 2/28/09, 12:40 AM
ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပြီး စိတ်ဝင်စားသွားတယ်..း)
အစ်ကို တွေးတာလေးတွေက စိတ်ဝင်စာစရာ.. ကြိုက်တယ်..
ဟိုအရင်ထဲက ဒီဘလော့လေးကို လာလာဖတ်ဖြစ်ပါတယ်.. အခုတော့ အမြဲလာတော့မယ်.. အသစ်တက် ပိုစ့်မှာလည်း လင့် ချိတ်ထားပါတယ်..
မိသားစုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင် အဆင်ပြေပါစေ ရှင်ဗျာ...
Phyo Evergreen - 2/28/09, 12:45 AM
ဟုတ်တယ်ကိုအန်ဒီ.. ငယ်ငယ်တုန်းကသောက်ရတဲ့ဆေးနံ့လိုမျိူးကြီး ရရင် အဲဒီအချိန်ကိုပြန်သတိရသွားရော..။ တစ်ခါတစ်လေ အနံ့နဲ့ အသံတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်.. .။ ရေမွှေးနံ့လေးတွေလည်း ရရင် လူတွေကိုသတိရတယ်..။
Rita - 2/28/09, 12:56 AM
WeSheMe ဟော်မုန်းတွေ ထွက်နေပါတယ် အခု
မိုးချိုသင်း - 2/28/09, 5:00 AM
ကို Andy ရေ
ခေါင်းစဉ်ဖတ်ပြီး လန့်သွားတာ။ ငါဘာများ မှားလုပ်မိပြန်ပါလိမ့် ဆိုပြီးတော့။ အဲဒီလို ခံစားမှုမျိုး တို့လဲ ခံစားဖူးတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက သီချင်းတွေ နားထောင်မိရင် အဲဒီအချိန်တွေကို သတိရနေတတ်တာမျိုးပေါ့။ ဒါတွေက ဟိုမုန်းတွေလားဆိုတာတော့ မသိခဲ့ဘူး။
ဘလော့ဂ်တွေဖတ်ရင်လဲ စတိုင်တွေ ကွဲပြားတာ အစုံစုံဖတ်ရတော့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ စတိုင်ဆိုရင် အမြဲသွားနေမိတာပဲ။ ပြုံးပြီး ဖတ်နေမိတာပဲ။ ဒါလဲ စွဲလန်းတဲ့ သဘောပါပဲ။ အူထဲ အသည်းထဲက ဆိုပါတော့..
ကို Andy အဲဒီလိုလာ ကွန်မန့်ရေးသွားတုန်းက ၀န်ခံရရင် စိတ်နည်းနည်းကျနေချိန်ပါ။ ဘလော့ဂ်စ ရေးစပြုတဲ့အချိန်။ ဟိုလို မရေးဘူးလား၊ ဒီလိုမျိုးပဲ ရေးသင့်ပါတယ်၊ ဒါကတော့ ပေါ့လွန်းပြီ စ သဖြင့်ပေါ့။ စာရေးရတာ လန့်လာတဲ့အချိန်မှာ ကို Andy အဲဒီလို အားပေးသွားတာ တကယ်ပဲ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အားပေးတဲ့ စာတကြောင်းတိုင်း အမြဲ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ရေးချင်တာတွေချည်း လျှောက်ရေးလိုက်တာ စာလာဖတ်သူတွေကို ဒုက္ခပေးနေမိတာ ခုထိ။ :))
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကို Andy!
ပုံရိပ် / Pon Yate - 2/28/09, 1:39 PM
ကိုအန်ဒီပြောချင်တာ association လို့ ခေါ်မလား။ တခုခုနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အဖြစ်အပျက်၊ ခံစားချက်တခုကို သတိရ ခံစားနေရတာမျိုး ထင်တယ်။ ဘလောက်တွေကတော့ သူ့ပုံစံလေးတွေနဲ့ သူပေါ့။ အစ်မချိုသင်းကတော့ အကြောင်းအရာ သေးသေးလေးတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပြုံးစရာ၊ အမှတ်ရစရာ၊ ချစ်စရာလေးတွေ ဖြစ်အောင် ရေးတတ်တယ်။
Phyo Maw - 2/28/09, 9:39 PM
အပေါ်တစ်ပိုဒ်ကနေ စလိုက်တာ အဆုံးသတ်ထိ အတွေးတွေ ဝေသွား၏။
တစ်ဆက်တည်း link သွား၏။
သက်ပိုင်သူ - 3/1/09, 1:32 AM
အကို ပြောတဲ့ ဟိုမုန်းကို brand တစ်ခုလို့ ပြောရင်ရမလား။ ဒါမှ မဟုတ် စွဲလမ်းမှုလို့ပြောရင်ရမလား။
khin oo may - 3/1/09, 2:47 AM
၂။ သူ့စာဖတ်ပြီးရင် ကိုယ့်အကြောင်းတွေ လဲ တလှည့်ပြောချင်စိတ်တွေ အရမ်းဖြစ်လာတယ်။ သူ့မောင်နှစ်မတွေ အကြောင်းနားထောင်ပြိးရင်ကိုယ်လဲ ကိုယ့်မောင်နှစ်မတွေ အကြောင်းပြောချင်လာတယ်။ သူ့အဖေအကြောင်းပြောရင်ကိုယ်လဲ ကိုယ့် အဖေအကြောင်းအရမ်းပြောချင်လာတယ်။ stimulation ကောင်းတယ် လို့ပြောရမယ်ထင်တယ။် အဲဒီမှာ အရှည်ကြီးရေးပြီး အဲဒီကွန်မက်က အဲလေ. သူဘလော့ နဲ ဘာဆိုင်လို့လဲ ဆိုပြီး ကိုယ့်ဘလော့ကိုပြန်သယ်ခဲ့ရတယ။်
PAUK - 3/1/09, 4:56 AM
strike - 3/1/09, 10:31 AM
P.Ti - 3/1/09, 2:00 PM
ပုံရိပ်ပြောသလို ဆက်စပ်ခံစားလို့ရတာဖြစ်မယ်... တချို့သီချင်းတွေ ကြားရင် ကျောင်းသားဘ၀ပြန်ရောက်သွားသလိုပေါ့...
ဥပမာ - ရင်ဂိုဆိုတဲ့ တောင်ပံပါရင် မင်းဆီကို သီချင်းကြားရင်... တောင်ပံပါရင် တစ်ပွဲနှစ်ဆယ် ဆိုပြီး နောက်ဆိုတာတောင် ပြန်သတိရသေးတယ်... အဆောင်မှာနေတုန်းက အဲဒီသီချင်းတွေခေတ်စားတာကိုး...
ဘလော့မှာစာဖတ်တော့လည်း တစ်ယောက်တစ်မျိုး မတူကြပဲ ကိုအန်ဒီ့စာကိုဖတ်ရင် အန်ဒီဟော်မုန်းရသလို အမချိုသင်းစာကိုဖတ်ရရင်လည်း မိုးချိုးသင်းဟော်မုန်းရတယ်...း)
လင်း - 3/9/09, 8:54 PM
ဟုတ်တယ် ပီတိပြောသလိုဘဲ။ သီချင်းနားထောင်ရင် အဲဒိ့ သီချင်းစနားထောင်တဲ့အချိန်ကို ပြန်ပြန်ရောက်သွားတယ်။
အလွမ်းဓါတ်ခံတွေများနေတယ်လို့ ထင်တာ လက်စပ်သပ်တော့ ဟိုမုန်းကိုး။ အဲဒါမှ ဒွတ်ခ ဟိုမုန်းတွေများနေပြီ ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့
ကိုဇေယျာ - 3/11/09, 10:04 PM
သီချင်းတွေနားထောင်တိုင်း အဲဒိခံစားချက်မျိုး ရပါတယ်။ ဥပမာ။ ဇော်ဝင်းထွဋ် ရဲ့ ဆေးဆိုးပန်းရိုက် သီချင်းနားထောင်ရတဲ့အခါ ကျနော် ၄ တန်းတုံးက ကက်ဆက်လေးကို ဖက်ပီး သီချင်းနားထောင်ခဲ့တာ အမြဲလိုလို ပြန်မှတ်မိနေတတ်တယ်။အဲဒိတုံးက atmosphere ကိုပြန်ရသလိုပေါ့။
ကျနော့ သူငယ်ချင်းကတော့ အနံပါပြန်ရတယ်ဆိုပဲ။
စလုံးနဲ့ပါတ်သတ်လို့ကတော့ Lavanda MRT နားရောက်တိုင်း တုန်တုန် သွားတတ်တယ် .. ICA ရောဂါပေါ့။
Melody - 3/19/09, 8:08 PM
ကဗျာဖတ်ပြီးတော့ ဘယ်သူ့ ကဗျာမှန်း တန်းသိတယ်ဆိုရင် လွန်မလားပဲ ... :P
Anonymous - 6/13/09, 5:52 PM
thanks so much for the interview tips in this post. Your tips can help mealot in both exams and interviews. :) I like this post too much.